Nnwom 142 NA-TWI - Mmoa mpaebɔ - Misu frɛ Awurade sɛ - Bible Gateway
Nnwom 141Nnwom 143
Nnwom 142 Nkwa Asem (NA-TWI)
142 Misu frɛ Awurade sɛ ɔmmoa me; mesrɛ no. 2 Meka me nsɛm nyinaa kyerɛ no; meka me haw nyinaa kyerɛ no. 3 Sɛ mereyɛ apa abaw a, onim nea ɛsɛ sɛ meyɛ. Ɔkwan a menam so no m’atamfo asum me firi wɔ so. 4 Sɛ mehwɛ me ho a, minhu ɔboafo biara; ɔbanbɔfo nso nni hɔ. Obiara nso nhwɛ me. 5 Awurade, misu frɛ wo sɛ boa me; wo Awurade, wone me hwɛfo. Wone nea ne ho hia me wɔ m’asetena nyinaa mu.